Nagarik News - चुरोटसँगै झोसियो परिवारको खुशी
होमपेज / अर्थ / समाज / चुरोटसँगै झोसियो परिवारको खुशी
चुरोटसँगै झोसियो परिवारको खुशी	29 Dec 2015 | 16:22pm मङ्गलबार १४ पुष, २०७२
गिरिराज बाँस्कोटा	Be the first to comment! 12345 (1 Vote)
दुर्घटनामा एकै परिवारको तीन जनाको मृत्यु भएपछि दाहसस्कारका लागि शवयात्रा गरिदैँ पाँचथर–चुरोट खानु हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ चुरोटले स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ । तर यतिमात्र नहुँदो रहेछ। घटनाको सुरुवात सानैबाट हुन्छ। तर घटना ठूलो भएर बाहिर आउँछ। यहाँ यस्तै भयो। सोमबार इलामको गोधकमा भएको एम्बुलेनस दुर्घटनामा परी एकै परिवारका तीन जनाको ज्यान गयो। दुई जना घाइतेको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यो घटनाको सुरुवाती कारण भने चुरोट भएको छ। ५६ वर्षीय मेदनी अधिकारी सामाजिक, राजनीतिक अगुवा हुन्। यतिबेला उनी परिवारका तीन सदस्य गुमाएर पीडामा छन्। आमा, बहिनी र छोरी एकै पल्ट गुमाएका उनीमाथि सिकिस्त घाइते भएर उपचार भइरहेका दाईको पीडामा एकैसाथ सामेल छन्।
उच्च रक्त चापका रोगी उनीमाथि वियोगको बज्रपात परेको छ। फिदिम बजारमा शोकाकुल बनाउने घटनाको यतिवेला सामाजिक सञ्जालभरि दुखः व्यक्त गर्ने असंख्यक छन्। धेरैका गह आशुले झिजेको छ । शवयात्रामा सयौँ मलामी सहभागि थिए भने धेरैले यस्तो दुख अरु कसैलाई नपरोस भन्ने कामना गरे। परिवार माथि त ब्रजपातनै छ, आफन्त, शुभचिन्तकलाई पनि मर्माहत बनाएको छ। तर यसको सुरुवाती कारण चुरोट बनेको छ ।८६ वर्षीय रेणुका अधिकारी अघिल्लो मंगलवार आगोमा जलिन्। अधिकारी चुरोटकी अम्मली रहिछन् तर लुकेर खाने। अरुले नदेखि लुकेर खाने बानी रहेको छ उनको। उमेर पाको भएकी उनलाई आफन्तले चुरोट नखान सुझाव दिएको हुन पर्छ। आफन्तहरुका अनुसार उनले ट्वाईलेटमा लुकेर खुकुरी चुरोट सल्काएकी रहिछिन्। सानो पनातीले (नातीको छोरा) ले देखेपछि हतार हतार हातमा बोकेको ग्याँस लाईटर लुकाएकी छिन्। ग्याँस लाइटर लुकाउँदा कपडामा आगो सल्किएको उनले पत्तै पाइनन्। शरीरमा आगो सल्किएर गएपछि फेरि तिनै पनातीले देखे । उनले आफ्ना बुवा आनन्द अधिकारीलाई सुनाए।हेर्दा हजुरआमा आगोमा जलिरहेकी रहिछन्। पानी खान्याएर आगो निभाएपछि उनलाई पाँचथर जिल्ला अस्पताल लगियो । जिल्ला अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगियो। केही दिनको उपचार पछि उनलाई घर फर्काउने कुरा भयो। रेणुकाले फर्किने बेला आफ्ना जेठो नाती खोजिन्। जेठो नातिी ३३ वर्षीय आनन्द हजुरआमालाई लिन गए। । मे १ च १४४७ नम्बरको जनमैत्री सेवाको एम्बुलेन्समा रेणुकलाई लिएर आनन्द, छोरी ५९ वर्षीया वर्षिय नरिमाया चौहान, छोरा टिकाराम अधिकारी र चालक ज्ञाननाथ प्रसाई साथमा थिए । रेणुकासहित आनन्द, नरिमायाको दुर्घटनामा परी मृत्यु भयो। टिकाराम र प्रसाई गम्भिर घाइते भए। उनीहरुको पुर्खौली गाँउ एकतीनमा आफन्तको निधनमा भएकाले झापाको विर्तामोडदेखि आउने आफन्तसँग अर्का नाति दिपक अधिकारी फिदिम आए । धन्न दिपक अर्को गाडीमा चढेका रहेछन।एम्बुलेन्स अघि अघि, आफन्त चढेको जिप पछि पछि थियो । मेची राजमार्गको गोधकको घट्टा गोलाईमा एम्बुलेन्स सडकदेखि तीन सय मिटर तल झर्यो, दुर्भाग्य पछि आउँदै गरेका जिपका आफन्तले फिदिम आहिपुगेपछि मात्र थाहा पाए । दुर्घटनाको जानकारी ढिलोमात्र भयो ।चुरोट खानेक्रममा जलेकी रेणुकालाई उपचार गराएर फर्किने क्रममा उनीसँग परिवारका तीन सदस्यको ज्यान गयो। छोरा टिकारार र चालक प्रसाईको उपचार हुँदैछ । दुर्घटनामा ज्यान गुाएका ३३ वर्षे आनन्द सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय थिए। उनका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन्। फेसवुकमा उनको फोटो राखेर सयौँले श्रद्धान्जली दिएका छन्।उनीहरु तीनै जनाको हेवा खोला घाटमा सोमबार राति दाहासस्कार गरियो। दुर्घटनमा मृत्यु भएकी छोरी नरिमायाको उनको घर मेमेङमा र बाँकी दुई जनाको फिदिममा हिन्दुसंस्कार काजकिरिया भइरहेको छ। नरिमायाको कथा झन दुखदायी छ । उनका श्रीमान केही वर्ष अघि खोलामा हामफालेर मरेका थिए भने गत वर्ष छोराले भुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए। परिवारमा दुखै दुख दिएको छ । एकैपटक आइलागेको विपत्तिले परिवारजन, आफन्त तथा शुभचिन्तकमा गहिरो पीडा दिएको छिमेकी सुर्य निरौलाले जनाए। सोमबार विहान एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा तीनै जनाको घटना स्थलमा मृत्यु भएको थियो । रातिको समयमा चालक निदाएर दुर्घटना भएको बताइएको छ। Tweet प्रतिक्रिया